Kaaliyaha Google ayaa dhawaan yeelan doona interface cusub | Androidsis
Kaaliyaha Google wuxuu dhawaan yeelan doonaa interface cusub
Kaaliyaha Google hadda waa qayb muhiim u ah istaraatiijiyada Google. Sidaa darteed, waxaan aragnaa sida wuxuu helaa waxyaabo badan oo cusub ama lagu dhex daray adeegyo aad iyo aad u tiro badan. Google waxay ku shaqeyneysaa astaamo cusub oo loogu talagalay, taas oo markan maraysa interface cusub oo lagu soo bandhigayo taleefannadeena Android. Isbedelada qaarkood oo haddaba socda.
Xaaladdan oo kale, waa interface ka fudud oo nadiifsan. Shirkaddu waxay markaa soo bandhigi doontaa naqshad aad u yar oo loogu talagalay Kaaliyaha Google, ka dib isbeddelo badan oo lagu soo bandhigay barnaamijyadooda iyo adeegyadooda bilihii la soo dhaafay. Marka lagu daro qaadashada boos yar habkan.
Sidan oo kale, markaan furno ama aan u yeerno Kaaliyaha Google marka hore, qaadan doonaa boos yar shaashadda. Ilaa hadda markaan u yeerno waxaan arki karnaa inay qaadaneyso ku dhowaad kala bar shaashadda. Shirkaddu waxay tan u beddeli doontaa inay qabsato oo keliya qayb yar oo ka mid ah, xagga hoose. Maaha isbedelka kaliya.
Markii aan si buuxda u furno, si aan ula macaamilno, waxaan sidoo kale arki karnaa isbeddelo. Marka hore, joojin doonaa qabsashada shaashadda oo dhan, oo dhacaya inay qabsadaan aqlabiyadda, laakiin waxaan awoodi doonnaa inaan aragno waxyaabaha ka dambeeya. Intaas waxaa sii dheer, waxaa ka go'an in la helo naqshad kooban.
Waxaa sidoo kale la arki karaa in goobooyinkii u adeegay xumbada hadalka ay ku baaba'idoonaan kiiskan wada hadalada. Isku-xidhka kaaliyaha cusub ee Google waxaa si rasmi ah loogu muujiyey Google I / O 2019. In kasta oo xilligan aan la sheegin taariikho si rasmi ah loogu soo bandhigo. Imtixaannadu hadda way socdaan.
Sidaa darteed, waa inaan sugnaa in yar oo dheer ilaa aan ku raaxeysto naqshadan cusub ee Kaaliyaha Google. Daahfurka waxay u egtahay inuu ku soo beegmayo imaatinka Android Q, taasi waxay keenaysaa tilmaam cusub oo lagu furo. Markaa haddii ay sidaas tahay, weli waxaan haysannaa dhowr bilood oo aan ku sugno arrintan. Waxaan dheg u noqon doonnaa wararka ku saabsan kiiskan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kaaliyaha Google wuxuu dhawaan yeelan doonaa interface cusub
LG Stylo 5: Nooca noocyadiisa kala duwan ee heer-gelitaan cusub